Ukuba ulungiselela ukuthabatha i-MCAT, kukho inamba yezixhobo zokufunda ezikhoyo, kuquka iinkqubo, iincwadi, iiklasi zokuhlaziya kunye nabafundisi. Uhlelo lokusebenza lwe-MCAT lunokuba luncedo oluthile kakhulu ngenxa yokungafani neeklasi okanye abaqeqeshi, ungahlaziya nanini na xa ufuna, kwaye ngokungafani neencwadi ezinzulu zokufunda, insiza kulula ukuyithatha nawe.
Ukufunda nge-MCAT akuyona into ongayenza kwiintsuku ezimbalwa. NgokukaKaplan, olawula inani leemviwo zesikolo, kufuneka ulindele ukuchitha iiyure ezingama-300 ukufunda. Umbutho weeNyuvesi zeMerika zezeMpilo unikeza isikhokelo esiphezulu sovavanyo kunye neeshedyuli zokuphononongwa kwesampula kunye nezinye izixhobo. Ezi zilandelayo zixhobo zonke zifunyenwe ukuhlaziywa kweenkwenkwezi ezine okanye ngaphezulu ukusuka kubasebenzisi kunye neengcali kwi-App Store Store ne-Google Play. Basebenzise njengesixhobo sokufunda ngokuzimeleyo okanye ngokubambisana namanye ama-MCAT. A
Umenzi : Ready4 Inc.
Ufumanekayo: iOS kunye ne-Android
Ixabiso : $ 149.99 (isiqendu samahhala sinika ufikelelo lweemvavanyo ezintathu)
Iimpawu eziphambili :
Iimviwo ze-MCAT zexesha elipheleleyo
Imibuzo engaphezu kwe-1,600 yovavanyo eyenziwe nguPrinceton Review
Izifundo ezingaphezu kwe-1 zezifundo zokufunda, kunye nezifundo zokuphononongwa ezingama-70.
I-Princeton Review summary of 172 izikolo zonyango nge-MCAT idatha ukuze uthelekise iziphumo zakho nendlela abanye abafundi abaye bafeze ngayo.
Kutheni Uthenga? UkuPhononongwa kwePrinceton yinkampani esetyenziselwa ukuvavanya i-prep eenkampani eyenziwe kwishishini iminyaka engaphezu kwamashumi amathathu. Insiza isebenzisa into efanayo yokuphonononga ngokukhawuleza efumaneka kwiicatshutshulwa zokuhlaziywa kwe-MCAT ye-Princeton.
Imibuzo yoVavanyo lweeMvavanyo ze-MCAT zeMfundo ze-McGraw
Umenzi: gWhiz, LLC
Ixabiso: $ 9.99 (kukho kwakhona inkululeko yamahhala kunye nenani elilinganiselweyo leemvavanyo zesampuli).
Iimpawu eziphambili (ingxelo ehlawulwayo):
Imibuzo engama-390 ye-MCAT evela kwiincwadi ze-MCAT zeMcGraw-Hill
Izicwangciso ezichanekileyo kwimpendulo eyintloko
Iimvavanyo ezine zovavanyo
Ukulandelela ukusebenza ukwenzela ukuba uvavanye ukusebenza kwakho kwicandelo ngalinye lovavanyo (i-chemistry, biology, njl.).
Kutheni Uthenga? I-McGraw-Hill iyigama elimiselweyo kwimpapasho yokupapasha nokufundisa. Inguqulelo yamahhala yale nsiza yindlela efanelekileyo yokufumana oko ukulindela kwi-MCAT, kwaye inguqulo ehlawulwayo ixabiso lentengo.
MCAT: Ziqhelise, zilungise, i-Flashcards
Umenzi : iVarsity Tutors
Ixabiso : Simahla
Ixesha elide, uvavanyo olude lokusebenza
Ukuphononongwa kunye nenkcazo yeziphumo zovavanyo
Umenzi we Flashcard
Kutheni Uthenga? I-Varsity Tutors yinkampani eyilungele ukuhlolwa. Lolu hlelo lokusebenza luthiwa yi-app yezemfundo efanelekileyo kwii-Awards ze-2016. Nangona le app ingaphelelanga kuneenguqu ezihlawulwayo, yindlela efanelekileyo yokuziqonda ngokuhlolwa kwe-MCAT.
I-MCAT Prep: MCAT Flashcards
Umenzi : Magoosh
Uvavanye ulwazi lwakho ngee-flashcards ezifakwe kwiindidi ze-MCAT: i-chemistry jikelele, i-chemistry, i-biochemistry, i-biology, i-physics, i-psychology kunye ne-sociology.
Insiza ayifuni ukufikelela kwe-intanethi ukusebenza, ngoko unokuyisebenzisa naliphi na indawo.
Imibuzo yokuphononongwa kweTek njengokuthi "ufunde", "ukuhlaziya," okanye "ukufunda" ukulandelela inkqubela yakho.
Yakha i-akhawunti ye-intanethi kwi-intanethi ukugcina iziphumo zakho zovavanyo.
Kutheni Uthenga? I-Magoosh ligama eliqingqiweyo kwiimpapasho ze-test-prp kunye neenkonzo ze-intanethi. Nangona le nkqubo inemisebenzi embalwa kakhulu kuneenguqu ezihlawulwayo, kulungelelanisa nezinye iikhompyutheni ze-MCAT zokuphononongwa njengeeklasi kunye neetekisi.
MCAT Flashcards nguKaplan
Fumana ama-flashcards ama-50 kunye ne-app ye-free, okanye ungene kwi-akhawunti yakho ye-Kaplan yokufikelela kumakhadi angaphezu kwe-1 000.
Ukukwazi ukwenza ngokwezifiso amakhadi akho ukwenzela ukuba unokwenza okungakumbi kwiiseshoni zakho zokufunda.
Ukulandelela inkqubela yakho kunye neenombolo zokuhlaziya ukusebenza kwakho.
Kutheni Uthenga? Ukuba sele sele ubhalisele kwikota yohlolo lwe-eplan yokuhlola, le yilona lwazi luncedo kakhulu. I-Kaplan yindawo egqityiweyo kwi-industry-prep industry. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngelixa le app ifumana ukuhlaziywa kweenkwenkwezi ezine kwivenkile yeGoogle Play, ineziphumo eziphantsi kwi-Apple App Store.
Unemizuzu engama-30? Funda nge-Space kunye ne-Astronomy!
I-First Elections College College
Ukuzama ukubulawa kweReagan